China Art & Design ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
I-Thermoplastics iyindlela enhle kakhulu yokubonisa kanye nokwenza izinto ezintsha. Ukukhethwa kwethu kwekhwalithi yekhwalithi ephezulu, ehlukahlukene ye-acrylic nemikhiqizo yesibuko sepulasitiki kusiza abaklami ukuthi benze imibono yabo yokudala iphile. Sinikezela ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu, amaphethini, osayizi beshidi nokwakhiwa kwe-polymer ukuhlangabezana nezidingo zobuciko obuningi nezinhlelo zokusebenza zokuklama. Sinikeza ukukhethwa okukhulu kwemiklamo ye-acrylic nokukhiqizwa kwabathengisi & amabhizinisi nokuhlobisa ikhaya ngezindlela eziningi zoku-oda - kusuka kusayizi kuya emaphethini nakusuka kumbala kuya ekugcineni.
Kusukela ekuvikeleni ukuboniswa kuya ezithombeni, i-acrylic iyinketho ekhethwayo yezicelo ze-glazing. Izibuko zemnyuziyamu neminye imibukiso nayo iyazuza ezintweni zokuhlunga ze-UV ze-acrylic. Ngeke i-acrylic ivikele kuphela ubuciko kuphela - ingubuciko. I-Acrylic iyindlela ekahle yokudala.
I-DHUA Acrylics iyimfashini futhi yesimanje yokuletha ukuthula, ukuvumelana nokuthintana kothando ekhaya lakho noma ekuhlobiseni kwehhovisi. Umhlobiso wasodongeni we-acrylic awunabuthi, awubulali, ukuvikelwa kwemvelo nokulwa nokugqwala. Ilungele ukuhlobisa izindonga zangaphakathi noma amawindi egumbi lokuhlala, igumbi lokulala noma isitolo. Akukho ukulimaza imvelo nempilo.
Ukuphrinta kwe-Acrylic kuyindlela yesimanje yokubonisa izithombe, ubuciko, izimpawu, imiyalezo yokumaketha noma esinye isithombe odongeni oluhehayo olulenga ukuphrinta. Iguqula isithombe sakho sibe wubuciko obumangalisayo lapho uprinta isithombe sakho noma ubuciko obuhle ngqo kwi-plexiglass ye-acrylic. I-DHUA acrylic yimikhiqizo ekhethwa ngabasunguli bezimpawu nabaqambi ngenxa yokuqina, isimo sezulu kanye nokusebenziseka kalula kwe-thermoforming.
Kusuka lapho kuboniswa khona abathengisi (POP) kuya embukisweni wasemnyuziyamu, i-DHUA acrylic iyinto ekahle yokubeka izitendi namakhasi okukhombisa / amabhokisi ngenxa yekhwalithi ephezulu ye-acrylic materail efakwe nge-shatterproof, Optically Pure, lightweight, cost effective, versatile and easy fabricated. Kwenza imikhiqizo yakho nomkhiqizo wakho kukhanye.
I-Acrylic inokubukeka kwengilazi okuyinika isitayela esihlukile. Ishidi le-Acrylic yi-substrate ekahle yokwenziwa kwamathebulethi, amashalofu nezinye izindawo eziyizicaba lapho ingilazi ingenakusetshenziswa noma kungafanele isetshenziswe khona.